ဟုတ်ကဲ့ အကို၊ အနှစ် ၅၀ ကျော် ပုံဟောင်းတွေကို Template:PD-Myanmar နဲ့ လိုင်စင် Tag လုပ်ထားပြီး GlobalSysop/Steward တွေ လာမဖျက်အောင် လုပ်ရင် ပိုကောင်းမယ်ထင်လို့ပါ။ လိုင်စင်မပါရင် ကျွန်တော်တို့ ရှားပါးဓာတ်ပုံတွေ ထပ်အဖျက်ခံရမှာစိုးလို့ပါ။ အသေးစိတ်က ဒီမှာ ပါ။ ကို Aunghtike နဲ့ Commons admin Russavia တို့ပြောထားတာလဲ ဒီမှာ  နဲ့ ကို Zawthet talk page  မှာ ရှိပါတယ်။ ကျေးဇူးပါအကို။
ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၂၃:၂၁၊ ၂၃ ဇူလိုင် ၂၀၁၄ (UTC)
New sign-up page for the Medical Translation Projectပြင်ဆင်
Township name errorပြင်ဆင်
Hi Sis, to reach Template:ရန်ကုန်တိုင်း, just click ရှု in upper left corner of the box in the article.
ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၅:၃၃၊ ၃၀ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄ (UTC)
Languages at left lower corner→Add links→Language:English (enwiki)→Page:xxxxx→link with page→Comfirm.
This is how we link pages between Myanmar and English Wikis. ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၂:၀၄၊ ၃၁ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၄ (UTC)
may I change "တမ်းပလိတ်:Wel-come" picture with png instead of jpg?ပြင်ဆင်
Thank you, Thaw Tar. You can edit the welcome template at Template:Welcome. You can replace the new png file in that line: File:Welcome3.jpg|center|မြန်မာဝီကီပီးဒီးယားမှ လှိုက်လှဲစွာ ကြိုဆိုပါတယ်။ မိတ်ဆွေ စိတ်ပါဝင်စားရာ ကဏ္ဍတွင် ပါဝင်၍ ဆောင်းပါး ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ Please feel free to edit the template. Be bold when updating the Wikipedia. By the way, I am not an admin.
ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၀၀:၂၇၊ ၂၁ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၁၅ (UTC)
ကျွန်တော်လည်း အဲဒီပုံကို ပြောင်းချင်နေတာဗျ။ နဲနဲကလေးဆန်တဲ့ပုံလို့ မြင်နေလို့။
Ninja✮Strikers «☎» ၀၃:၅၂၊ ၂၁ စက်​တင်​ဘာ​ ၂၀၁၅ (UTC)
ဟုတ်ကဲ့ပါ။ အားနာပါတယ် အကိုရေ၊ Tag လုပ်လိုက်ရတာ။
ကျွန်တော်လဲ ပုံတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ global sysop/steward တွေ ပြသနာ လာရှာမှာစိုးလို့ပါ။ ဆွေးနွေးဖို့ Wikipedia:လက်ဖက်ရည်ဆိုင် (အိုင်ဒီယာ)#File upload policy discussion ဖွင့်ထားပါတယ်။ အကို့ရဲ့ ဝီကီကို ပံ့ပိုးပေးမှုများအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၀၉:၅၃၊ ၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀၁၆ (UTC)
Barnstar for you!ပြင်ဆင်
Participate in the Ibero-American Culture Challenge!ပြင်ဆင်
Editor အကောင့် links တွေ ဘယ်လိုချိတ်ရမလဲဆိုတာ ကျေးဇူးပြု၍ ရှင်းပြပါ။ပြင်ဆင်
ဒါပေမဲ့ en:Wikipedia:Sock puppetry ကိုတော့ ဖတ်ထားပြီး English Wikipedia ဘက်မှာတော့ ဖြစ်နိုင်ရင် မသုံးစေချင်ပါဘူး။ တယောက်ယောက် သတိထားမိ သွားနိုင်ပါတယ်။ သတိထားမိသွားရင် en:Wikipedia:Sockpuppet investigations လုပ်ကြပါလိမ့်မယ်။ Thank you and happy editing.
ဖြိုးWP (ဆွေးနွေးရန်) ၁၀:၁၈၊ ၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၆ (UTC)
How to edit or createပြင်ဆင်
၈ အောက်တိုဘာ ၂၀၁၈၊ ၁၂:၀၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။